2010-2013 BMW K1300R Led Headlight 2005-2009 BMW K1200R Led Nalka Hore
Item No .: MS-K1200HA
Nalka hore ee cusub ee K1200R iyo K1300R, kuna habboon 2005-2009 BMW K1200R iyo 2010-2013 BMW K1300R.
Sannadkan 2005-2009 BMW K1200R ayaa keentay nalka hore ee gaariga Qalabka beddelashada waa Midowga Yurub ee E24-sumadda oo la ansixiyay, waxay ka kooban tahay 1 muraayadaha muraayadaha dhaadheer, 3 silsilad wareega hoose iyo DRL, Die-cast aluminium guryaha, waxqabadka wanaagsan ee kala-baxa kuleylka. Aad u dhalaalaya oo leh jajabyo casri ah oo la casriyeeyay si ay amaan badan ugu ahaadaan wadistaada Si fudud loo rakibo kaliya beddel nalka hore ee halogen-ka hore. Nalka hore ee nalalka BMW K1300R ayaa hogaaminaya 2005-2009 BMW K1200R iyo 2010-2013 BMW K1300R.
Fiidiyowga BMW K1200R/K1300R Led Headlight
Caddaynta nalka hore ee BMW K1200R Led
Number Model MS-K1200HA
Dhererka 126.2mm / 4.97inch
width 263.5mm / 10.37inch
qoto 143.5mm / 5.64inch
Power 66W @ Laydhka Sare, 30W @ Beam Sare
Qulqulka Luminous 4000lm @ Laydhka Sare, 1800lm @ Laydhka Hoose
Caddaynta nalka hore ee BMW K1300R Led
Muuqaalka BMW K1200R K1300R Nalka hore ee gaariga
Shahaadada - Iftiinka hore wuxuu xambaarsan yahay calaamadda E24 ee Midowga Yurub sidaas darteedna wuxuu u hoggaansamayaa Shuruudaha Badbaadada Aasaasiga ah.
Naqshad Gaar ah - Waxay ka kooban tahay 1 muraayadaha muraayadaha dhaadheer, 3 lensicircle lens low iyo DRL; Guryaha aluminium ee Die-cast, naqshadda hawo-mareenka hawada ee horumarsan, saxanka kuleylka ee jeexjeexan, samee kala-baxa kuleylka si dhakhso leh.
Super Bright- Waxaa laga sameeyey jajabyo hoggaamin ah oo sare u kaca ah (Ray sare: 6000LM, Joog hoose: 4000LM) oo leh 1 muraayad baare sare leh iyo 3 D-qaabeeya muraayadaha indhaha oo hooseeya. Waxay bixisaa kala duwanaansho ballaadhan oo iftiin leh oo si siman ugu faafaa khadka xariiqa sayniska, nabadgelyo badanna gaadhigaaga.
Rakibaad Fudud - Rakibid Deg Deg ah. DIY Kaliya adoo isticmaalaya hal sifeeye. Si toos ah u beddel Iftiinka hore ee Halogen. Majiraan kelmadaha, ma laha calaamadda qaylo-dhaanta aan caadiga ahayn. Dhamee kaliya ku dar daboolka ilaalinta nalka hore ee gaariga. Si toos ah u beddel Iftiinka hore ee Halogen.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado qiimaha lagu geynayo Turkiga, mahadsanid...
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado qiimaha gaarsiinta Moscow, mahadsanid